ဟိုက်ဒရာဘတ်မြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
ထိပ်ဆုံးမှစ၍ လက်ယာရစ်: ရမ်ဇန်ညဈေးတွင် မြင်ရသော ချာမီနာ ဗလီ၊ ကူတွတ် ရှာဟီ ဂူသင်္ချိုင်း၊ ဟူစိန် ဆာဂါးရှိ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်၊ ဖာလက်ခ်နူမာ နန်းတော်၊ ဂါချီဘောင်းလီရှိ ယနေ့ခေတ် ရှုမျှော်ခင်း၊ ဘာလ မန်ဒါ
နာမည်ပြောင်(များ): ပုလဲတို့၏ မြို့တော်
ကိုဩဒိနိတ်: Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:ISO 3166/data/IN' not found. 17°22′N 78°29′E﻿ / ﻿17.37°N 78.48°E﻿ / 17.37; 78.48ကိုဩဒိနိတ်: Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:ISO 3166/data/IN' not found. 17°22′N 78°29′E﻿ / ﻿17.37°N 78.48°E﻿ / 17.37; 78.48
မိုဟာမက် ကူလီ ကူတွတ် ရှား
ဂရိတ်တား ဟိုက်ဒရာဘတ် မြူနီစီပါယ် ကော်ပိုရေးရှင်း
ဟိုက်ဒရာဘတ် မက်ထရိုပိုလစ်တန် ဖွံ့ဖြိုးရေး အာဏာပိုင် အဖွဲ့
ဘွန်သူး ရမ် မိုဟန် (TRS)
၆၂၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၂၄၁ စတုရန်းမိုင်)
၇,၂၅၇ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၂၈၀၂ စတုရန်းမိုင်)
၅၄၂ မီတာ (၁၇၇၈ ပေ)
• ခန့်မှန်း (2018)
၁၀၄၇၇/km၂ (၂၇၁၄၀/sq mi)
၉.၇ million (ဆဋ္ဌမ)
ဟိုက်ဒရာဘတ်မြို့ သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တလန်ဂါးနားပြည်နယ်၏ မြို့တော်နှင့် အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်ပြီး ဥပဒေအရ အန္ဓရဒေသပြည်နယ်၏ မြို့တော်လည်း ဖြစ်သည်။  အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၏ မြောက်ဘက်ရှိ ဒက်ကန်ကုန်းမြေမြင့်ပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး မူစီမြစ်၏ ကမ်းပါးတွင် ၆၂၅ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၂၄၁ စတုရန်းမိုင်) မျှ နေရာယူထားသည်။ ဟိုက်ဒရာဘတ်သည် တောင်ကုန်းထူထပ်သော မြေမျက်နှာပြင်တွင် လူတို့တူးဖော်ထားသော ကန်များနှင့်အတူ တည်ရှိပြီး မြို့လယ်ခေါင်၏ မြောက်ဘက်ရှိ မြို့တည်စကတည်းက တည်ရှိခဲ့သော ဟူစိန်ဆာဂါးကန် အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ မြို့တွင် လူဦးရေ ၆.၉ သန်း ရှိပြီး မက်ထရိုပိုလစ်တန်ဒေသတွင် လူဦးရေ ၉.၇သန်းခန့် ရှိသဖြင့် အိန္ဒိယတွင် စတုတ္ထမြောက်လူဦးရေ အများဆုံး မြို့နှင့် ဆဋ္ဌမမြောက် လူဦးရေ အများဆုံး မက်ထရိုပိုလစ်တန် ဒေသအဖြစ် တည်ရှိသည်။ ထွက်ကုန်တုန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၇၄ ဘီလီယံမျှရှိသဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဂျီဒီပီကို ပဉ္စမမြောက် ပံ့ပိုးပေးသော မြို့ ဖြစ်သည်။
↑ Cities having population 1 lakh and above, census 2011။ Government of India (2011)။7May 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 December 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World's Cities in 2018။
↑ ၃.၀ ၃.၁ Urban agglomerations/cities having population 1 lakh and above။ Government of India။ 13 November 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Hyderabad district records highest literacy rate"၊ 1 April 2011။6April 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 8 April 2011။
↑ "Time to put metropolitan planning committee in place"၊ Times of India၊ 28 July 2014။ 22 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Global city GDP 2014။ Brookings Institution (22 January 2015)။ 25 May 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4March 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Global city GDP rankings 2008–2025။ PwC။ 31 May 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 December 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Drinking water supply for urban poor: City of Hyderabad။ Safe Water Network (1 October 2016)။3March 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3March 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟိုက်ဒရာဘတ်မြို့&oldid=705677" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။